WordPress: Ihe ntinye 1 # XNUMX saịtị ọ bụla ga- | Martech Zone
Taa saịtị m bibiri !!! Amaghị m nke ụdị spambots jidere m, mana ha na-egbu weebụsaịtị m ụbọchị niile. Ndị a bụ nkọwa spam-bots nke na-anwale ugboro ugboro iji nyefee Spam okwu. WordPress enweghị nchebe megide ụdị ọgụ a. Na Akismet na-enyere aka MGBE nrubeisi nke spam kwuru.
Achọrọ m ihe ga-agọnarị post na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Àgwà Ọjọọ ngwa mgbakwunye na-eme.
Nke a bụ mmebi nke ihe ọ na-eme:
Àgwà Ọjọọ bụ usoro ederede PHP nke na-egbochi spambots ịnweta saịtị gị site na nyochaa arịrịọ HTTP ha na-atụle ma jiri ha tụnyere profaịlụ site na spambots mara. Ọ gafere Onye Ọrụ-Agent na Referer, agbanyeghị. Omume Ọjọọ dị maka ọtụtụ nchịkọta software nke PHP, yana enwere ike itinye ya na sekọnd n'ime ederede PHP ọ bụla.
Ntinye ngwa mgbakwunye enweghị nsogbu na saịtị m agbadoro. Na mberede, Àgwà Ọjọọ egbochila ihe ntinye 50 kemgbe m tinyere ya ihe dịka 10 nkeji gara aga. Saịtị m amalitelarị ịrụ ọrụ nke ọma ebe ọ bụ na nchekwa data dị ala nke ukwuu. Ka ọ dị, akpọnwụ Akismet m agaghị ejupụta ọsọ ọsọ ugbu a.
Agara m na nke ọ bụla n'ime ndị ahịa m na saịtị a n'abalị a ma wụnye ya Àgwà Ọjọọ ngwa mgbakwunye. Achọghị m ka ha nwee ụdị ụbọchị ahụ m nwere! M ga-emekwa ka ha cheta na teknụzụ ndị ọzọ, Àgwà Ọjọọ emepụtawo teknụzụ ha maka ọtụtụ nyiwe dị iche iche.
Biko echefula itufu ego ole na ole na ndi ahu. Enwere m ike ịgwa gị na ọpụpụ taa na saịtị 4 ahụ m nwere mebiri m 90% nke ego m na-enweta kwa ụbọchị… (yabụ enweghị m ike ị nweta Starbucks m taa!)
Nwelite: 1/8/2007 - Otu n'ime ndị ahịa m nwere nsogbu ebe a na-ajụ ya njikọ site na ibe nbanye. Na-enyocha saịtị di na nwunye ọzọ, achọpụtara m na Àgwà Ọjọọ nwekwara arụ na Whitelist ọrụ. Havekwesịrị idezi faịlụ, whitelist.inc.php, ma tinye adreesị IP nke a na-egbochi ya na ọtụtụ adreesị IP.
Y’oburu n’onweghi ike igbochi adreesị IP, enwere m ike ịjụ ajụjụ nchekwa data iji ajụjụ a:
Họrọ * SITE 'wp_bad_behavior` ebee' request_uri``ihe '% nbanye%'
Tags: omume ojooblacklistblog kwuruikwu okwu spamspam kwuruwhitelist
Jenụwarị 6, 2007 na 1:22 PM
Na afọ ọhụrụ obi ụtọ. Ekele dịrị ime 100.000 kacha elu!
Na ekele maka ichetara m banyere Omume Ọjọọ. Echere m na m arụnyere ya ma na-enwe ntakịrị ntakịrị site na ọnụ ọgụgụ spam na-ekwu na m nwetara ụbọchị ole na ole gara aga. Ọzọkwa, na-elele ọnụ ọgụgụ m (dịkarịsịrị ala karịa nke gị), achọpụtara m na nnukwu ọnụọgụ blọgụ m sitere na ihe nchọgharị na-abụghị nke nwere obi ike; Spam bots n’okwu ndị ọzọ.
Askimet na - egbochi ihe ngbalị ịza ajụjụ 70 kwa ụbọchị n’ime ụbọchị ole na ole gara aga.
Agbanyeghị, mgbe m gụsịrị akụkọ gị, mwube blog wee nyochaa m ugboro abụọ, yana - na - ahụkarị njehie abalị - hụrụ na echefuru m ịme ka nkwụnye ahụ rụọ ọrụ Ugbu a ọ na-agba ọsọ, achọrọ m ịma etu ọnụọgụgụ ga-esi gaa.
Jenụwarị 8, 2007 na 11:54 PM
Daalụ maka ịtụ m aka na mgbakwunye Doug a. Ahụla m ka okwu m na-agbadata ebe ọ bụ na ị wụnye ya.
Jenụwarị 12, 2007 na 1:23 PM
m na-ahọrọ spam karma 2.2
Jenụwarị 22, 2007 na 2:50 PM
Nụrụ na ụfọdụ ndị na-ede blọgụ nwere nsogbu na nkwụnye ahụ, na-ebelata usoro ha, na-eme ka arụ ọrụ na sava ahụ.
Nke a bụ onye mmemme na-arụ ọrụ na mgbakwunye nkwụchi spam ọzọ: